विदेश भ्रमणमा ढुकुटी सक्दैछ, माकुने सरकार | नेपाल इटाली डट कम
विदेश भ्रमणमा ढुकुटी सक्दैछ, माकुने सरकार
October 23, 2009 — nepalitaly
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको विदेश यात्रा मोहकै कारण राज्यको ढुकुटी रित्तिदै गएको छ। सरकारका विशिष्ट अधिकारीहरुका लागि एक वर्षका लागि भनेर छुट्याइएको २ करोड ५० लाख रकम साउन र भदौ महिनाको पहिलो हप्तासम्ममा सकिएको छ, त्यो पनि दुई वटा भ्रमणमै
माधव नेपाल मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख दायित्व शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याई नयाँ संविधान निर्माण गर्नु हो। तर, अहिलेको सरकार यो कामभन्दा झिनामसिना काममा अल्झेको महसुस गरिंदैछ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु विदेश भ्रमणमा रमाउन थालेका छन्। संसदको अवरोध हटाउने पहल गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण भयो भने जाजरकोट लगायतका जिल्लामा झाडापखालाको महामारी भएको बेला स्वास्थ्य मन्त्री विदेश सयरमा मस्त रहेको तितो यथार्थ हाम्रो सामुन्ने छ। अनि इजरायलसमेत गएर लाखौं रुपैयाँ सिध्याएर जनताका लागि कुनै लाभका काम नगर्ने श्रम मन्त्रीको कुरा अर्कोतिर छ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको विदेश यात्रा मोहकै कारण राज्यको ढुकुटी रित्तिदै गएको छ। सरकारका विशिष्ट अधिकारीहरुका लागि एक वर्षका लागि भनेर छुट्याइएको २ करोड ५० लाख रकम साउन र भदौ महिनाको पहिलो हप्तासम्ममा सकिएको छ, त्यो पनि दुई वटा भ्रमण मै। अचम्म त्यति पैसाले पनि पुगेको पो रहेनछ, अनि विनियोजित रकम भन्दा ५० लाख बढी खर्च गरिएको छ। अर्थमन्त्रालयका उपसचिव रामशरण पुडासैनीकाअनुसार विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणमा अहिलेसम्म ३ करोड भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। मितब्ययी सरकारको खोजी भएको यो बेला जथाभावी खर्च हुनु दूर्भाग्यपूर्ण हो।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको विदेश भ्रमणमा विनियोजित रकम भन्दा बढी खर्च हुनु भने कुनै आश्चर्यको कुरो होइन रहेछ। विगतका वर्षमा पनि विनियोजित रकम भन्दा बढी खर्च गरेर राज्य कोषमा धावा बोलिएको रहेछ। अर्थविद् डा. शंकर शर्मा भन्छन्– बजेटमा कमी छुट्टाउने र बजेटमा भएको भन्दा निकै बढी रकम खर्च हुदै आएको छ। रकम बढी नदेखियोस भनेर कमी छुट्टयाउने र अर्को शिर्षकमा बजेट राख्ने गलत परम्परा बसेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री माधव नेपाल चीन र नर्वे भ्रमणको तयारीमा जुटेका छन्। गएको जेठमा प्रधानमन्त्री भएका उनले अहिलेसम्ममा तीन पटक विदेश भ्रमण गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणका के कति खर्च गरेछन् भन्ने विवरण प्रस्तुत गर्दैछौ।
असंग्लन आन्दोलनको १५ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन इजिप्टको कायरोमा जादां उनले ८७ लाख ६६ हजार ८ सय ६६ रुपैया सिध्याएका रहेछन्। त्यसपछि भारत भ्रमणमा उनले १ करोड ५९ लाख ५० हजार ३ सय ४ रुपैया खर्च गरेका रहेछन्। यही दुई वटा भ्रमणमै विनियोजित रकम सकिएको रहेछ। अनि संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिका जांदा प्रधानमन्त्रीको टोलीले १ करोड ८५ लाख ८९ हजार रुपैयां सिध्याएछ।
प्रधानमन्त्रीको विदेश यात्राको श्रृंखला जारी छ। मन्त्रीहरु पनि विदेश भ्रमणका लागि तम्सिरहेका छन्। अहिले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे सहितको टोली विदेश भ्रमणमै छ। विदेश भ्रमणका लागि विनियोजित रकम सकिएपछि पनि थप खर्च गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको काइदा गजबै छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्री महोदयहरुलाई जसरी तसरी पनि विदेश भ्रमणको खर्चको चांजोजोपांजो मिलाउन बाध्य छन्, अर्थ मन्त्रालयका निरीह कर्मचारीहरु। उपसचिव पुडासैनी भन्छन्–मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार अर्थमन्त्रालय बजेट छुटाउनु हो।
बिचरा यिनले गरुन् पनि के ? नेताकै पुच्छर समातेर राम्रो ठाउंमा सरुवा हुने कर्मचारीहरुले नेताहरुको गलत कदम विरुद्ध बोल्ने आंट गर्ने कुरा भएन। अनि फेरि मन्त्रिपरिषद्ले बढी खर्च गर्ने निर्णय गरेपछि सकिएन कुरा ? अर्थविद्हरुले भने विदेश भ्रमणका नाममा जथाभावी खर्च गर्दा देशमा आर्थिक विश्रृंखलता हुने चेतावनी दिएका छन् । डा. शर्मा भन्छन्–मन्त्री परिषदबाट हुने खर्च भएकाले यसलाई बांध्नको लागि नियमालवी बनाउन जरुरी छ, नभए खर्च हुने क्रम रोकिने अवस्था छैन। यिनको चिन्ता जायज छ। तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले यस्तो कुरा सुन्ने र ब्यवहारमा ल्याउने सम्भावना देखिंदैन्।
गजबको कुरा त के हो भने कथंकदाचित राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले कुनै देशको भ्रमण गर्न खोजे भने रकम छैन्। अर्को शिर्षकबाट खर्च जुटाउनु पर्ने देखिन्छ। विदेश भ्रमणमा सबै मन्त्रीले एकै हिसाबले खर्च गर्न पाउदा रहेनछन्। जसको शक्ति उस्को भक्ति भने झै केही मन्त्रीले अति नै खर्च गरेको पाइएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला र रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले भारत भ्रमणको बेला गरेको खर्चमा ठूलो अन्तर देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारीका लागि गएकी परराष्ट्र मन्त्रीले चार दिनमा ११ लाख ९७ हजार ७५ रुपैया खर्च गरेकी थिइन् भने विद्या भण्डारीले चारै दिनमा ४ लाख ५६ हजार ९ सय ७२ रुपैया खर्च गरेकी रहिछन्।
मन्त्री भएपछि सुजाता भारत, चीन, अमेरिका, पोर्चुगल, इजिप्ट भ्रमणमा गइन्। उनको सबै भ्रमण महङ्गोमा पर्छ। जम्बो मन्त्रिपरिषद्का धेरै सदस्य विदेश भ्रमणमा जाने क्रम जारी छ। भ्रमणमा जांदा डलरमा भत्ता र अन्य सुविधा लिन पाइने भएकाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आफूमात्र होइन, आफ्ना मान्छेलाई समेत लिएर विदेश भ्रमणमा जाने गरेको पाइएको छ।
« इलाम र झापामा सीमा मिचिएको ठहर
दुवै मिर्गौला काम गर्न नसक्ने भएपछि मलेसियाबाट कार्की रित्तो हात घर फर्किए »